स्त्री वा पुरुष, दिउँसो जन्म लिने व्यक्तिमा हुन्छ यी खास रहस्य, तपाई कहिले जन्मिनुभयो ? – Khabaarpati
स्त्री वा पुरुष, दिउँसो जन्म लिने व्यक्तिमा हुन्छ यी खास रहस्य, तपाई कहिले जन्मिनुभयो ?
October 8, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on स्त्री वा पुरुष, दिउँसो जन्म लिने व्यक्तिमा हुन्छ यी खास रहस्य, तपाई कहिले जन्मिनुभयो ?
काठमाडौँ । ज्योतिषमा कुनै व्यक्तिको जन्म समयका आधारमा स्वभाव र भविष्यवाणीका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। ज्योतिषाचार्य मनीष शर्माका अनुसार जान्नुहोस् दिनमा जन्मने स्त्री र पुरुषको स्वभावका बारेमा ।
१) जुन व्यक्ति दिउँसो जन्मिन्छन् उनीहरु बुद्धिमानी हुने गर्दछन्।२) दिउँसो जन्मिने व्यक्तिको स्वभाव धार्मिक हुने गर्दछ। यस्ता व्यक्ति सधै उर्वावान हुने गर्दछन्।३) दिउँसोमा जन्मिने व्यक्ति सकारात्मक हुने गर्दछन्, तर कहिलेकाही समस्याका कारण मानसिक तनावको महशुस गर्ने गर्दछन्। यिनीहरु विपरित परिस्थितीमा पनि सही निर्णय लिने गर्दछन्।
४) जुन व्यक्तिको जन्म दिनमा हुने गर्दछ, उनीहरुको कुण्डली शुभ हुने गर्दछ। यिनीहरु पैसा कमाउन सही बाटो अप्नाउनेमा विश्वास गर्ने गर्दछन्।५) यिनीहरु आफ्नो काम इमान्दारी र कडा मेहनतका साथ गर्न मन पराउने गर्दछन्। यिनीहरु दोस्रो व्यक्तिको काममा वास्ता गर्दैनन् र आफ्नो काममा अरुले दखल दिएको मन पराउँदैनन्।
६) यस्ता मानिस सााजिक कार्यमा भाग लिने र आफ्नो सम्बन्ध पूर्ण इमान्दारीका साथ निर्वाह गर्ने हुन्छन्।७) दिउँसो जन्मिने व्यक्ति हरेक स्थितीमा सुख रहने गर्दछन्।
८) यिनीहरुको स्वभावबाट सबै प्रभावित हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति सबैसँग चाडै घुलमिल हुने गर्दछन्।९) यस्ता व्यक्ति मानसिक रुपमा बलिया हुने गर्दछन्। यिनीहरु जीवनमा आउने हरेक राम्रा नराम्रा परिस्थितीका लागि सधै तयार हुने गर्दछन्।१०) दिउँसो जन्मिने व्यक्ति थोरै जिद्धीवाला हुने गर्दछन्। जुन कामलाई हातमा लिन्छन्, त्यो काम पुरा गर्ने गर्दछन्।
बिबाहका लागि युवतीको योग्यताको विज्ञापन देखेर दुनियाँ हैरान !
छोडिदिनुहोस् डाइटिङ, बढेको पेट घटाउने यस्तो छ वैज्ञानिक उपाय
July 3, 2021 goodmam
March 3, 2021 goodmam